Akhbaarti Zamaanki Hore .. Halaagi Qoomki Reer Luud Ee Fawaaxishta Xun U Kala Dheereyn Jirtay
Maalintii danbe waxa magaalada soo galay sadex Nin oo qurux badan waxayna u tageen Nabi Luud si uu umarti qaado balse xishood dartii ayuu Nabi Luud (N.N.K.H) ku yiri nimankii magaaladan warkeeda ma haysaane ee iskaga baxa oo meel kale marti qaad ka dalbada, laakiin sadexdii nin way diideen inay meel kale qabtaan oo waxay ku adkaysteen inuu isagu marti qaado.
Xaaskii Nabi Luud oo ahady duq laga falay afka, ayaa warkii gaarsiisay qoomkeedii, kadibna koox ka tirsan qoomkii ayaa gurigii Nabi Luud iskugu yimid si ay ugu xad-gudbaan Sadexda Nin ee dhalinyarada ah.
Markuu Nabi Luud calaacalay ayey sadexdii nin dhaheen; waxaan nahay Malaai’k, kumana soo gaarayaan ee Eebe ayaa na soo diray oo waa la halaagayaa qoomkan.
Markii koowaad way indho beeleen kadibna malaa’iktii waxay ku dhaheen Nabi Luud cadaabku waxa uu ku dhacayaa barrito subaxa, subaxuna waa dhow yahay .. Nabi Luud qoomkiisa cidina kamay rumaynin, marka laga reebo isaga iyo labadiisii gabdhood.
Har iyo habeena waa la dul maraa, lamana garanayo in goobtaasi ahaan jirtay magaalo bari.
Xaaskii Nabi Luud waxay ahayd gaalad, faafisana sirta saygeeda, waxayna raali ka ahayd waxay qoomkoodu samaynayaan laakiin sida culumadu sheegayaan ayadu maysan samayn-jirin xumaanta sababtoo ah uma cuntanto in Nabi Luud ay xaaskiisu ahaato naag xumaanta samaysa.